Fitsangatsanganana an-tanety 4x4 Overland: fitsidihan'ny Beaume Trans-Africa tsara an'i Lesotho
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Lesotho » Fandehanana fizahan-tany 4 × 4 Overland: fitsidihan'ny Beaume Trans-Africa an'i Lesotho
Fandehanana fizahan-tany 4 × 4 Overland: fitsidihan'ny Beaume Trans-Africa an'i Lesotho
Aprily 24, 2017
Ny Eksodosy fizahan-tany 4 × 4 Overland - vondrona mpitsangatsangana iraisampirenena 28 (fantatra koa amin'ny anarana hoe Beaume Africa Group) no niditra tao amin'ny Fanjakan'ny Lesotho tamin'ny 18 aprily 2017 tamin'ny alàlan'ny Sani Pass any amin'ny faritra Atsinanan'ny firenena, manamorona ny Tendrombohitra Drankensberg.
Ny lalana miakatra Sani Pass dia lalana mideza izay rakotry ny ranomandry sy ny lanezy amin'ny ririnina, ary 9 km ny halavany. Nijanona tao amin'ny Sani Mountain Lodge, tao Sani Top izy ireo. Sani Top dia vakoka manerantany izay miorina amin'ny 2,874 metatra ambonin'ny haabon'ny ranomasina, ary mirehareha amin'ny “The Highest Pub in Africa.” Avy eo dia niroso ho any anaty tany izy ireo namakivaky ireo làlana mihodinkodina any Lesotho, izay mizaha ny hakanton'ny lohasaha mahafinaritra, tendrombohitra, lohasaha, ary miaina ny haavony avo. Tonga tao Semonkong (toerana setroka) izy ireo, ary nitoetra tao amin'ny Semonkong Lodge nandritra ny roa andro. Nandritra ny fotoana dia nitsidika ny Maletsunyane Fall izy ireo, riandrano 192 metatra teo amin'ny Ony Maletsunyane, nianjera avy teo amin'ny sisin'ny basalt Triassic-Jurassic, ary nifandray tamin'ny vondrom-piarahamonina teo an-toerana, niaina ny fomba nentim-paharazana nentin'ny vahoaka Basotho. Nandao an'i Lesotho izy ireo ny alakamisy 13 aprily 2017, namaky ny vavahady Qacha's nek, nankany Afrika atsimo, hanatevin-daharana ny Garden Route, handeha ho any Cape Town.
I Lesotho dia mirehareha amin'ireo tendrombohitra mijoalajoala - avo indrindra any atsimon'i Afrika, miaraka amin'ny fahitana manaitra ny tontolo madiodio voamariky ny renirano miolakolaka, riandrano mikoriana ary renirano madio. Ankoatr'izay, noho ny toetrandro avo lenta dia miaina ny toetr'andro sy ny oram-panala mangatsiaka izy, efa ho 9 amin'ny 12 volana amin'ny taona. Toerana mety amin'ny fizahantany fizahan-tany sy fanatanjahantena izy io; toerana iray ho an'ny mpandeha mandinika sy tena mpitsangatsangana, ary ho an'ireo olona reraky ny fialantsasatra ara-barotra ary mitady traikefa nahafinaritra "miala".
Ny hetsika dia nokarakarain'ny 4 × 4 World Explorer Sdn Bhd (Malaysia) sy ny African Expedition (Afrika atsimo), ary mpikaroka avy amin'ny firenena samy hafa, ary mandany fiara mandritra ny 60 andro avy any Durban, Afrika Atsimo, hatrany Lesotho, mankany Cape Town, ary avy eo mankany Namibia, Botswana, Zambia, Tanzania, ary ny toerana farany mankany Mombasa, Kenya. Ity ekipa mpikaroka efa za-draharaha ity izay nandalo an'i Lesotho, nandray anjara, nandamina ary nitarika dia an-tsokosoko maro be nanerana ny faritra maro teto amin'izao tontolo izao. Ny tanjon'ity dia ity dia ny hampiroborobo ny fandriam-pahalemana, ny hatsaram-panahy, ny finamanana ary ny firindrana eo amin'ny samy olona any Malezia sy Lesotho. Nandritra ny fitsidihan'izy ireo tany Lesotho, dia nitsidika ireo toerana misongadina sy toerana fizahan-tany maro izy ireo.
Nisy horohoron-tany mafy namely an'i Chile afovoany
Ny Fikambanana fizahan-tany any Karaiba dia mikasa ny hanitatra ny antso avo ataon'ny Karaiba ao amin'ny tsena arabo